တရုတ်နိုင်ငံ အကြီးဆုံးသဲကန္တရအားပတ်ထားသည့် ရထားလမ်း ပြီးစီးတော့မည် - Xinhua News Agency
တရုတ်နိုင်ငံ အနောက်မြောက်ပိုင်း ရှင်းကျန်း (ဝေဂါ) ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသရှိ Hotan-Ruoqiang ရထားလမ်းပိုင်း တည်ဆောက်မှုအား ၂၀၂၁ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၂၇ ရက်တွင် တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ပေကျင်း ၊ ဇွန် ၁၆ ရက်(ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ၏ အကြီးဆုံးတာ့လီမခန်းသဲကန္တာရအား ပတ်ထားသည့် အရှည် ၂,၇၁၂ ကီလိုမီတာ ရှိသော ရထားလမ်းသည် ဖောက်လုပ်မှု ပြီးစီးသွားပြီဖြစ်ကြောင်း နှင့် နိုင်ငံအနောက်မြောက်ပိုင်း ရှင်းကျန်း (ဝေဂါ) ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွင် ဇွန် ၁၆ ရက်၌ စတင်ပြေးဆွဲသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း China State Railway Group ကုမ္ပဏီ (China Railway) က ဇွန် ၁၅ ရက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
၈၂၅ ကီလိုမီတာရှည်လျားသည့် ရထားလမ်းသည် ကမ္ဘာ့ ဒုတိယအကြီးဆုံး ရွေ့လျားသဲကန္တာရ ဖြစ်သည့် တာ့လီမခန်းသဲကန္တာရ၏ တောင်ဘက်အစွန်းတစ်လျှောက် Hotan မြို့မှ Ruoqiang ကောင်တီအထိ အရှေ့ဘက်သို့ဦးတည်ကာ ဆန့်တန်းထားပြီး သဲကန္တာရအတွင်း အရှည် ၆၅ ရာခိုင်နှုန်း ရှိသည်။ ရထားလမ်းတည်ဆောက်မှုအား ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် စတင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
စုစုပေါင်း ၄၉ ဒသမ ၇ ကီလိုမီတာ ရှည်လျားသည့် တံတားငါးစင်းသည် သဲမုန်တိုင်းတိုးဝှေ့ရိုက်ခတ်ခြင်းအား ကာကွယ်ရန် ရထားလမ်းအား မြှင့်ခဲ့ကြောင်း China Railway က ပြောကြားခဲ့သည်။
ရထားလမ်းဖွင့်လှစ်ခြင်းသည် ရထားများသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် ပထမဆုံးအကြိမ်အနေဖြင့် သဲကန္တာရကို စက်ပိုင်းပြည့်ပတ်နိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း China Railway က ပြောကြားခဲ့သည်။ချည်ထည် ၊ သစ်ကြားသီးများ ၊ စွန်ပလွံသီးများ နှင့် တွင်းထွက်ပစ္စည်းများ အပါအဝင် ရှင်းကျန်းအထူးပြုများ၏ ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး နှင့် သွားလာမှုအား လွယ်ကူချော‌မောစေမည်ဟု ဆိုသည်။ (Xinhua)
China to complete railway skirting largest desert
Source: Xinhua Editor: huaxia 2022-06-15 23:56:17
BEIJING, June 15 (Xinhua) — A railroad in northwest China’s Xinjiang Uygur Autonomous Region will begin operation on Thursday, completinga2,712-km railway line looping around China’s largest desert, the Taklamakan, said the China State Railway Group Co., Ltd. (China Railway) Wednesday.
The 825-km railroad stretches eastward from Hotan City to Ruoqiang County along the southern edge of the Taklamakan, the world’s second-largest shifting-sand desert, with 65 percent of its length inside the desert. Its construction started in December 2018.
Five bridges extending 49.7 km in total lift the railroad to protect it against sandstorms, said the China Railway.
The opening of the railroad will enable trains to skirtadesert full circle for the first time in the world, said the China Railway. It will also facilitate traveling and logistics of Xinjiang specialties including cotton, walnuts, dates, and minerals. ■
Photo – Aerial photo taken on Sept. 27, 2021 showsasection of the Hotan-Ruoqiang Railway under construction in northwest China’s Xinjiang Uygur Autonomous Region. (Xinhua)
အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် မျောက်ကျောက်ရောဂါကူးစက်ခံထားရသူ ၇၀ ကျော်ထိရှိလာ